Baasaboorka Af -xumeeyaha
Qalabka Gargaarka Koowaad
2014/10/15 Shiinaha Soo -dejinta iyo Dhoofinta
Bandhigga Soo -dejinta iyo Dhoofinta Shiinaha waa mid ka mid ah bandhigyadii ugu horreeyay ee shirkaddeennu ka qaybgashay, iyo sidoo kale bilowgii horumar weyn. Macaamiisha bandhiggu waxay ilaashadeen xiriir iskaashi oo muddo dheer nala lahaa
2016/9/8 Bandhigga Daryeelka Caafimaadka Afrika
Shirkaddayadu waxay ka qaybgashay bandhigga daryeelka caafimaadka Afrika waxayna xidhiidh dhow la yeelatay macaamiisha macmiisha maxalliga ah. Waqtigan xaadirka ah, waxaan sidoo kale sii wadnaa iskaashiga aan la leenahay macaamiil badan oo Afrikaan ah. Badeecadaha la dhoofiyo waa qiyaastii 3 milyan oo doolarka Mareykanka ah sanadkii.
Shirkaddayadu waxay ka qaybgashay CMEF, in ka badan 100 shay oo badeecooyin ah ayaa la soo bandhigay, oo ay si buuxda u jeclaadeen macaamiishu, iyo inay la xiriiraan tiro macaamiil ah kana qaybqaataan iskaashiga.
Dhismaha No.1,3,4,5, Aagga Warshadaha Bamboo, Magaalada Xiaofeng, Degmada Anji, Magaalada Huzhou, Zhejiang, PC PRC: 313300
subscribe dheh Wargeyskeena